Iiklasikhi ezintathu ezimnyama. Ngokuphanga, ngeposi nangamahlathi. | Uncwadi lwangoku
NgeCawe ibilusuku lokuzalwa luka Kirk DouglasNgoDisemba 102 nakwindlela eya kukungafi esele inayo kwimovie. Kwimpilo yakhe ndibeka Brigade 21 (UWilliam Wyler, ngo-1951), iklasikhi ye-noir yefilimu, esekwe kumdlalo we-Broadway. Ngebug emnyama esele iqhubeka kunye nemva kwemini yangeCawa ndiqhubeke nayo Ihlathi lekhonkrithi ukuqhubeka nokuzonwabisa kunye nokungafi, USterling Hayden. Ngokukhawuleza emva koko ndakhumbula enye yeempawu zakhe (kunye noStanley Kubrick), I-heist egqibeleleyo. NgoMvulo uthinte Unoposi ubiza kabini. Kwaye iinoveli zantlandlolo zeza kum ezakhokelela kwimiboniso bhanyabhanya. Iiklasikhi ezintathu ezimnyama abazenzileyo UWR Burnett, uLionel White noJames M. Cain. Apho baya khona.
1 I-Postman ihlala ibiza kabini-uJames M. Cain
2 Ihlathi leKhonkrithi-WR Burnett
3 I-Heist egqibeleleyo-uLionel White
Unoposi uhlala ebiza amatyeli amabini -UJames M. Cain
Ithunyelwe kwi 1934, Idlula kancinci kakhulu kumakhulu amaphepha ahamba ngokukhawuleza ngenxa yokubaliswa kwayo ngokulula kunye nezenzo zayo ezikhawulezayo. Ingaba u isihloko esaziwa kakhulu mhlawumbi eMntla Melika UJames M. Cain, kunye Imbalasane yohlobo noir kuhlobo lwakho biliswe nzima.
Ibalisiwe kwi umntu wokuqala ngumlinganiswa ophambili wenoveli, u-hustler UFrank Chambers, wavuna impumelelo enkulu. Kwakhona wabangela ukuphazamiseka ngexesha lakhe ngokuxuba isini kunye nobundlobongela Kwakukwibali apho i inkanuko, ukubawa nolwaphulo-mthetho bakha unxantathu ogqibeleleyo.
Kwaye ezi nguqulelo zimbini zefilimu zidumileyo ziye zanegalelo kolo dumo: le ivela kwi-40s ekhokelwa ngu UTay garnett kunye neenkwenkwezi UJohn Garfield kunye noLana Turner, kunye no-1981, nguRob Rafelson, kunye UJack Nicholson kunye noJessica Lange njengaye UFrank noCora. Ndiza kunamathela kweyokuqala, kodwa bobabini bayayazi indlela yokubonisa ithoni yentsusa.
Ihlathi lekhonkrithi - WR Burnett
Oku kunye nokulandelayo, I-heist egqibeleleyo, zimbini iinoveli kunye nezo ukulahleka kukhokelela Zininzi kakhulu kuhlobo kwaye zinditsala kakhulu. Kuya kufuneka ukuba ububone nobuso obubeka kubo USterling Hayden, umntu ozelwe e-cinema bobabini Dix ukuphatha, umntu ongcungcuthekisayo ongaphantsi kwelizwe, njenge UJohnny udongwe, isela lokubetha kwindawo yomdyarho.
Aba babini banemvelaphi kunye necebo a ukuphanga ngogonyamelo ephuma ezandleni kwaye iphele kakubi kubo bonke abantu, ubuchopho kunye nabasebenzisana nabo. Kwaye bobabini bane ukuhanjiswa Ikorale yabalinganiswa ngamabali abo baxelela ngokujonga kumfundi.
Kwimeko Ihlathi lekhonkrithi, ibhalwe kwi 1949, ingxelo yakhe ngu yomile, ikhonkrithi kwaye ngaphandle kwemvakalelo. Abalinganiswa bazele iziphene, kodwa, emva koko, bonisa ukunyaniseka engagungqi kumaqabane akhe, kangangokuba ekugqibeleni abalahle. Ukunyaniseka nothando.
Kwaye ngesicatshulwa esihle, inye kuphela inokuphuma ukulungelelaniswa kwefilimu ithathwa njengomsebenzi wobugcisa wohlobo. Ityikityiwe UJohn huston e 1950.
UEdwin Doc Riedenschneider sisaphuli-mthetho esidumileyo esiphuma nje entolongweni kwaye sinecebo eliqaqambileyo yeba ubucwebe. Ukufuna imali qhagamshelana negqwetha elikhohlakeleyo UAlonzo D.Emmerich, owamkela isindululo, kwaye u-Doc ulungiselela ukubhangqa ngaphandle kokukrokrela iinjongo eziyinyani zomxhasi wakhe.
Ukwenza umphangi oyifunayo gaya amadoda aliqela njengengcali yesefu ULouis Ciavelli, Kumqhubi UGus Minissi kunye nomxhaphazi Dix ukuphatha. Ukubetha kuyimpumelelo kwaye iDix kunye noDoc bazisa iigugu kuEmmerich. Kodwa le, ibhengezwe kukuthandana okuphambeneyo, iya kuzama ukubabamba.
I-heist egqibeleleyo -ULionel White
I-American Lionel White yaqala njenge intatheli yomsitho ngaphambi kokuba azinikezele ekubhaleni. Ubungcali bakhe yayingamabali okuphanga nokuthumba. Y Utyala ngaphezulu udumo lwakhe kulungelelwaniso lwefilimu ezazenziwe ngeencwadana zakhe ezifana Ikhefu elicocekileyo nangaphezulu kwayo yonke le nto I-heist egqibeleleyo.
Njengenoveli, isitayile sakhe yome kwaye inzima, kunye nencoko ebukhali. Abalinganiswa bakhe bahambela kwisingqisho se Isiphelo abasilawuli kwaye inxulumene nezinye iinkanuko ukuba azilawuli nazo. Yonke into inethoni ukusweleka Uyazi ukuba abayi kuba nako ukuphepha Nangona kunjalo, kwaye ikhona impumelelo njengakwi Ihlathi lekhonkrithi, ngonaphakade unethemba lokuba bayaphumelela kwaye bayenze, Ukubaleka, kwaye baya kwenza kakuhle, nangona benobundlobongela.
Ukuyikhupha phezulu, eli bali lithathwe yinkosi yohlobo olo UJim Thompson, otyikitye Iskripthi, kunye nenye evela kwi-cinema njenge UStanley Kubrick, ngubani owayalela 1956 enye yezo yobugcisa zohlobo ukubalwa ukusuka ku umbono okhethekileyo wexesha kunye nemontage. Kwaye ukugcwala kwayo kugcwele ithoni kunye nemifanekiso eqingqiweyo ye cinema engasabonwayo.
UJohnny udongwe Uvalelwe iminyaka emine kwaye ulungiselele ngokungxamisekileyo hit kwindawo yomdyarho ukusuka eLong Island, eNew York, apho unokufumana khona ukuphangwa kwezigidi ezibini zeedola Ngethuba lokubhiyozela ugqatso olubaluleke kakhulu lonyaka.
Ufuna ukuba nayo abasebenzisanayo nabangaqeqeshwanga ukunqanda impazamo yesiqhelo yolu hlobo lwemicimbi: leyo yamasela ihlala igqibela ngokulwa namanye amasela. Wonke umntu unayo iingxaki zoqoqosho (Ilahleko kwimarike yemasheya okanye ekubhejeni, amatyala kubabolekisi, inkosikazi ebangayo…) kwaye banethemba lokuqala ubomi obutsha ngempango.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Iiklasikhi ezintathu ezimnyama. Ngokuphanga, ngeposi nangamahlathi.